Marketing any anaty ho an'ny orinasa madinidinika | Martech Zone
Marketing any anaty ho an'ny orinasa madinidinika
Alarobia, Martsa 20, 2013 Talata, Martsa 19, 2013 Douglas Karr
Manohy manome fotoana mahavariana ho an'ny orinasa kely ny teknolojia. Raha mitohy mandroso ny herinaratra sy ny sehatra informatika dia mitohy mitotongana hatrany amin'ny solaitrabe ny vidiny. Taona vitsy lasa izay, ny fitaovana fikarohana sy ny sehatra sosialy dia dolara an'arivony isam-bolana ary ireo orinasa afaka mividy vola ihany no misy. Rahampitso aho dia hiresaka amina vondrona matihanina orinasa kely momba ny fitaovana hanampiana azy ireo sy UpCity dia iray amin'ireo fitaovana eo an-tampon'ny lisiko.
UpCity ampiasain'ny sehatra Pathway ™ ataon'izy ireo. Pathway ™ dia manombatombana ny fahitana an-tserasera ny orinasanao, ary manome dingana tsikelikely hananganana ny fahitana an-tserasera amin'ny alàlan'ny fanatsarana motera fikarohana, fitantanana laza, bilaogy ary fanatsarana lisitra eo an-toerana.
UpCity dia lozisialy SEO matanjaka sy sehatry ny fanabeazana izay manome anao tatitra sy fahitana ary drafitra iray isaky ny dingana hitarihana anao amin'ny fahombiazan'ny marketing amin'ny Internet.
Fanatsarana ny tranokala - Manatsara ny tranonkalanao ho an'ny mpanjifa aloha ary ny motera fikarohana faharoa.
Fanatsarana eo an-toerana - Hamarino tsara fa manana lisitra madio sy marina ianao amin'ny tranokala toy ny Google+ Local, Yelp ary maro hafa.
Fampandrenesana ny media sosialy - Mamorona fisian'ireo tranonkala media sosialy toy ny Twitter sy LinkedIn ary ianaro ny fampiasana azy ireo hiteraka fitarihana.
Fitantanana laza - Fantaro izay lazain'ny olona momba ny orinasanao sy ny fifaninananao amin'ny tranokala famerenana sy amin'ny media sosialy ary valio mifanaraka amin'izany.
fitorahana bilaogy - Ianaro ny fomba ahafahan'ny bilaogy misy fiatraikany lehibe amin'ny fahitanao an-tserasera sy ny fotokevitra tsotra momba ny bilaogy.
Tags: fitorahana bilaogyfanatsarana eo an-toeranafikarohana eo an-toeranafanatsarana ny fikarohana ao an-toeranaseo eo an-toeranafitantanana lazahaino aman-jery sosialyfanatsarana ny haino aman-jery sosialytranonkala fanatsarana
FAMPANDROSOANA finday - Fikarohana ny Landscape finday